Ukuzithoba-Kutheni le nto sizithoba? | IBezzia
USusana godoy | 08/08/2021 18:00 | Psicología
Ukuzithoba yenye yezo mvakalelo ezikhoyo ngakumbi kunokuba sicinga, Ngelishwa. Nangona ukuthotywa kufanele ukuba kungafikeleleki, akusoloko kunjalo kwaye yiyo loo nto xa kungaveli kubantu bangaphandle, isenokuba lolona hlazo lukhulu lugxile kwisiqu sakho.
Namhlanje siza kufumanisa kutheni sizithoba kumacandelo ahlukeneyo namaxesha awahlukeneyo. Into ekufuneka sisebenzele kuyo kuba ukuba asonwabanga yindlela esiphila ngayo okanye indlela esicinga ngayo, akukho namnye onokonwaba yedwa. Ngokuqinisekileyo ukusukela namhlanje uza kuyibona ngamehlo ahlukeneyo!
1 Ukuzithoba, yintoni?
2 Kutheni le nto siqhele ukuzithoba
3 Ukusombulula njani ukuzithoba
Luvakalelo olupheleleyo olunezichazo ezimbi kuthi. Ke yinto ekufuneka sisoloko siyisiphula ebomini bethu. Inxulunyaniswa neemeko ezithi zenzeke kuthi ezingakhange zibe nethemba, kodwa endaweni yokukhangela indlela eya kuzo, sitshona kancinci kuba ezo ngcinga zinexabiso elincinci ziyasihlasela. Ukongeza kwiingcinga, iimvakalelo zikwachasene ngokupheleleyo. Ukungangqinelani kuya kubakho ngalo lonke ixesha kodwa ngayo, ikwanetyala. Ukuba siyayicinga, awucingi ukuba yinto ekufuneka siyenzile yonke imihla ukuyenza itshintshe?
Kutheni le nto siqhele ukuzithoba
Ngokubanzi, sinokuthi ngokufuthi kungenxa yokoyika ukwaliwa. Sifuna ukuvunywa rhoqo kwicala, ngamanye amaxesha, labantu abadlula kuphela ebomini bethu kodwa abangahlali. Ngesi sizathu, kubalulekile ukuba sizithande njengoko sinjalo, ukufanelekela amandla ethu kunye nokusebenza kwababuthathaka. Kodwa ukuba sonwabile ngeziqu zethu akufuneki sifikelele kolo loyiko lokusilela. Uloyiko olwandayo kubudlelwane kunye nokusebenza. Ngoba? Kungenxa yokuba abantu abatyekele ekuzithobeni bahlala begxeka bona.
Ukusombulula njani ukuzithoba
Xa sijamelene nento esivakalelwa okanye sicinga ngayo, akusoloko kulula ukuyitshintsha ukusuka kolunye usuku ukuya kolandelayo. Kodwa ungasebenza kuyo kwaye umphumo uyakumangalisa.
Hlala kude nabo bonke abantu ababi abakungqongileyo: Ayikho lula, besele siyilumkisile kodwa lelinye lamanyathelo ekufuneka siwathathile. Soloko uhlala nomntu oxabisa iinzame zakho, okuxhasayo ngamaxesha amabi kwaye ehleka kwelona xesha.
Zama ukwamkela iingxakiAkukho lula ukungena kuzo zombini, kodwa kufuneka sicinge ukuba ayizizo zonke izinto ezenzekayo ngenxa yethu. Ukuba baninzi beza ebomini bethu ukusinika impembelelo entsha xa sijongana noxanduva olutsha kunye neemeko ezintsha esiza kuziphumeza ngomzamo.
Yithi ndlela-ntle nomona: Umona uzisela ntoni kanene? Ngokuqinisekileyo akukho nto. Ke lixesha lokuba umshiye ngasemva kuba uza nezona ngcinga zimbi. Yiba nombulelo ngento onayo kuba uyakuhlala ekhona umntu ongenaso nesiqingatha.
Musa ukulawula yonke into ejikeleze wena: Sithanda ukulawula izinto ezithile kunye nezenzo ezithile, kodwa zininzi ezinye esinakho. Kuya kufuneka uyamkele kwaye uzame ukwenza ukuba izinto zihambe kwaye zingadluli kuwe. Kuba zikhona iintsuku ezimbi kodwa ayisiyiyo yonke impilo eya kuba mbi.
Sebenzela kwiimpazamo zakho: Kufuneka sizibone iimpazamo esizenzayo mihla le, kuba linyathelo lokuqala lokuba nako ukuzilungisa kwaye siye phambili. Kodwa musa ukohlwaya ngenxa yabo, kodwa into elungileyo malunga nobomi kunye nale ngxaki uqobo, kukuba isonjululwe. Nguwe kuphela oya kuthatha isigqibo sokuba uza kuba nini kwaye njani, kodwa kuyenzeka.
Iingcinga ezimbi kunye nokuzithemba okuphantsi bangunobangela wokuzihlazisa abantu abaninzi abaziva. Zama ukuhlala ujonga ezinye iindlela, ungafuni ukuba nayo yonke into phantsi kolawulo kwaye ungazithelekisi nomnye umntu, kuba nguwe kuphela emva kwakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Psychology kunye nesibini » Psicología » Ukuzithoba: Kutheni sizithoba?
Yeyiphi imilo yokunika amashiya am